Ciidanka Xoogga dalka oo guulaystay hakinta dagaal beeleed…
Taliyaha guutada 15 aad ee qayta 21 aad ee Ciidanka Xoogga dalka Generaal Mascuud Maxamed Warsame iyo ciidamo uu hoggaaminayo ayaa ku guulaystay in ay kala dhexgalan Maleeshiyaad Shalay ilaa Xalay ku dagaalamayay deegaanada Xananbuure iyo Qalanqale ee Gobolka Galgaduud.
Taliyaha iyo ciidankiisa ayaa markii ay gaareen deegaanka Qalanqale ee Gobolka Galgaduud waxa ay rasaas xooggan kala kulmeen Maleeshiyaadkii dagaalamayay, iyaga oo ugu dambayn ku guulaystay in ay kala dhexgalaan Maleeshiyaadka dagaalamaya.
Saraakiisha Taliska oo ay Axadle la hadashay ayaa u sheegay in aysan gaarin wax qaraasaa hayeeshee ay adegtahay in ay kala qaadaan Maleeshiyaadka dagaalamaya oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka oo ay saaranyihiin qoryaha gawaarida dushooda laga rido.
“Wararka sheegaya Taliye Mascuud aa dhaawacmay waa waxba kama jiraan taliyahu waxa uu ku howlanyahay dhexdhexaadinta beelaha walaalaha ah “ ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidanka ku baxay deegaanka Qalanqale ee Gobolka Galgaduud.
Maleeshiyaadka ku dagaalamay deegaanada Xananbuure iyo Qalanqale ayaa iska dilay ku dhawaad 20 ruux oo ah dhinacyadii dagaalamay sidoo kale tiro intaasi ka badan oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la dhigay Isbitaalada degmooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado.
Dadka dirirtaasi ku dhintay waxaa ka mid ah Wasiirkii hore ee Wasaarada Shaqadda iyo Shaqaallaha Galmudug Daahir Shidane Cabdi oo u dhintay dhaawac soo gaaray xili uu isku dayaayay in uu kala dhexgalo beelaha dagaalamaya.